China 125A 160A 250A 3 Pole AC MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Remagetsi fekitori nevatengesi | Njodzi
Muenzaniso Zita: TOS1
Nha. YePole: 3P
Rated Inoshanda Voltage: 400V AC
Munyonga Type: A
Kubatsira kwe AC MCCB 125A 160A 250A
Iyo yakaumbwa kesi redunhu mudariki, yakapfupikiswa MCCB, rudzi rwemidziyo yekudzivirira yemagetsi inogona kushandiswa kwakawanda voltages, uye frequency eese ari maviri Hz uye 60 Hz. Misiyano mikuru pakati peyakaumbwa-kesi uye diki wedunhu mudariki ndeyekuti iyo MCCB inogona kuve nezviyero zvazvino zvinosvika mazana maviri nemazana emamiriyoni, uye marongero ayo erwendo anowanzo gadziridzwa. Imwe mutsauko ndeyekuti MCCBs inowanzo kuve yakakura kwazvo kupfuura maMCB. Sezvo nemhando zhinji dzedunhu breaker, iyo MCCB ine matatu makuru mabasa:
Kudzivirirwa pakuwandisa - mazaya ari pamusoro peiyo yakatarwa kukosha iyo inogara kwenguva yakareba kupfuura zvakajairwa kunyorera.
Kudzivirirwa pakukanganisa kwemagetsi - Munguva yekukanganisa senge pfupi redunhu kana tambo yekukanganisa, pane mafungu akakwirira zvakanyanya anofanirwa kukanganiswa ipapo ipapo.
Kuchinja wedunhu nekudzima - Iri ibasa risinganyanyoitika revapambi vematunhu, asi vanogona kushandiswa nechinangwa icho kana pasina chakaringana shanduko yemanyorerwo.
Izvo zvakasiyana siyana zvezvino ratings zviripo kubva kuumbwa-kesi wedunhu mabhureki anovabvumidza ivo kuti vashandiswe mune akasiyana siyana ekushandisa. MaMCCB anowanikwa nematanho azvino anotangira pamitengo yakaderera sema15 amperes, kusvika kumaindasitiri ratings senge 2,500 amperes. Izvi zvinovatendera kuti vashandiswe mune ese ari pasi-simba uye epamusoro-simba kunyorera.
Technical Ratidziro ye AC MCCB 3P Dunhu Rinotyora
Chimiro chePamusoro Parizvino Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Breaker
Pashure: Mazuva ese Kudzivirirwa Isiri-yekurapa UV Mwenje Yakachena Inoraswa Chiso Mask
Zvadaro: Yakanaka Hunhu PV Cable Sunga - 4to1 MC4 Y Bazi Rinobatanidza Solar Panel Parallel Kubatanidza - RISIN
yakakwirira yazvino wedunhu mudariki